GreenKhabar – मूलपेज
विश्वकै अनौठो आलु, जसलाइ खाँदाखेरी मानिस सँधै जवान रहन्छ !
एजेन्सी । आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको । जसलाई बैज्ञानिकहरुले केही वर्ष खर्चेर सफल परिक्षण गर्न सषम भएका छन् । टेस्ट ट्यूबमा तयार गरेर पछि माटोमा रोपिने यो आलु वैजनी रंगको छ । सामान्यतया बजारमा पाइने आलु भन्दा[Read More…]
by GreenKhabar —	August 1, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर
निमपत्ता मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसको फलका नसोचेका फाइदा जान्नुहोस्
निमको पात अर्थात ‘निमपत्ता’बाट मिल्ने लाभ र यसको प्रयोगबारे त प्राय: हामी जानकार छौँ । निमपत्ताको उपयोग विभिन्न प्रकारका औषधिको रुपमा गरिन्छ । तर, के तपाइँलाई निमको फलबाट हुने फाइदाबारे जानकारी छ ? हामीले पातमात्रै प्रयोग गर्दै आएपनि निमको फल अझै बहुउपयोगी हुन्छ । १. आँखा र कानका लागि निमको फलको प्रयोग आँखा र कानमा प्रयोग हुने मलम बनाउन गरिन्छ[Read More…]
by GreenKhabar —	August 1, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित उद्यम, हरित खबर
अमृत हो तीते करेला, खाएको एक हप्तामै यसरी निको पार्छ भयानक रोगहरु
औषधिको रुपमा हेरिने करेला मानव शरीरका निकै फाइदाजनक छ । मानिसहरु गर्मीयाममा करेलाको तरकारी बढी खाने गर्दछन् । करेलाले घामबाट पनि बचाउने बताइन्छ । थाहा पाउनुस् करेलाका फाइदाहरुः – खानामा रुचि बढाउँछ । – छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । – खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । – पेटसफा राख्दछ । – कब्जियत हुन दिँदैन । – पेटसम्बन्धी विभिन्न[Read More…]
एजेन्सी । क्यान्सरका विरामीमाथि २५ वर्ष लामो सोधपछि क्यालिफोर्निया युनिवर्सिटीको मेडिकल फिजिक्स एवं साइकोलोजीका सिनियर प्रोफेसर डा हर्डिन बी जन्सले भनेका छन्– ‘क्यान्सरको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने किमोथेरापीले क्यान्सर पीडित विरामीलाई दर्दनाक मृत्युतर्फ धकेल्न सक्छ ।’ तर, क्यान्सरलाई केही घण्टामै ठिक पार्ने थुप्रै औषधिहरु छन् । अंगुरको विउको धुलो (सत्व) हालै भएको एक शोधमा यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि[Read More…]
मंगलबार को दिन भुलेर पनि गर्न नहुने ५ काम
मंगलबार को दिन कस्ता कस्ता कामहरू गर्न हुदैन? यहाँ शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न नहुने काम तल उल्लेख छ । सोमबार, बुधवार र शुक्रवारलाई सोम्यबारको श्रेणीमा राखिएको छ भने आइतबार र बिहीबारलाई कडाबारको श्रेणीमा राखिएको छ । मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ[Read More…]
by GreenKhabar —	July 26, 2017 —	0 comments —	मूलपेज
प्याजको टुक्रालाई पैँतालामा राखेर सुत्दा पाइन्छ यी फाइदा
प्याज तथा लसुनमा हावालाई शुद्ध बनाउने तथा किटाणु नष्ट गर्ने गुण हुन्छ भन्ने कुरा त प्रायलाई थाहा नै होला । तर, राती सुत्नुअघि प्याजको एक टुक्रा पैँतालामा राख्दा मिल्ने फाइदाबारे तपाईंलाई जानकारी छ ? सायद नहुनसक्छ । यसरी प्याजको टुक्रा राख्दा शरीरका अंगहरुलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ । यो कुरा मेडिकल्ली पनि प्रमाणित भएको छ कि प्याजमा रहेको फस्फोरिक एसिडले धमनीमा[Read More…]
by GreenKhabar —	July 26, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर
कुन तरकारीमा के औषधि पाइन्छ ?
हरेका प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका पौष्टिकतत्वहरु पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्यारोटि भिटामिन एको प्रारम्भिक स्वरुप हो । क्यारोटिन शरिर भित्र गएर भिटामिन एमा परिणत हुन्छ । साधारणतया तरकारीमा कार्बोहाइड्रटमध्ये माड र सेलुलोज, खनिज पदार्थमा आइरन र क्याल्सियम र भिटामिन ए,[Read More…]
by GreenKhabar —	July 25, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य
खुर्सानीका फाईदा र बेफाइदा
एजेन्सी– सामान्यतया चिल्लो र पिरो खानेकुरा नखान विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन् । चिल्लो तथा पिरो पेटमा समस्या आउने र अल्सर बनाउने साबधानी दर्शाउँदै आएका छन् । रातो खुर्सानीले पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्याबाट केही हदसम्म जोगाउँछ । पिरो खानेकुराले तौल घटाउनेदेखि शरिरलाई न्याने बनाउन र शरिर भित्रका रक्तनलीलाई सफा बनाउन खुर्सानी महत्वपूर्ण मानिन्छ । खुर्सानी खाँदाका फाइदाः चिसोबाट बचाउँछः खुर्सानीको विशेषता[Read More…]
by GreenKhabar —	July 25, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर
महिनावारीमा नियमित दही खाने कि ?
महिनावारी भएका बेला सामान्य पेट दुख्नु स्वाभाविक हो तर कसैकसैलाई यो बेला अत्याधिक पेट दुख्छ र नियमित कामकाज गर्न पनि गार्हो हुने हुन्छ। महिनावारीको यस्ता पीडाका कारण करिब ८० प्रतिशत महिला चिन्तित हुन्छन्। हालै गरिएको एक अध्ययनमा यस्ता पीडित महिलाहरूले दैनिक २ कप जति दही सेवन गरे करिब ४८ प्रतिशतमा पीडा कम भएको देखिएको छ। दहीमा पाइने क्याल्सियम तथा अन्य[Read More…]
औषधिका रुपमा लसुन
लसुन एक महत्वपूर्ण घरेलु औषधि हो । प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न भोजन तरकारीमा गरम मसलाको रुपमा लसुनको प्रयोग हुने गरेको छ । यसको खेति हाम्रो देशमा पनि हरेक ठाउँमा हुने गरेको छ । लसुनका सामान्य लाभ आयुर्वेदिक मतअनुसार लसुनले वात कफ नास गर्छ र दुखाई शान्त पार्छ । यसले पाचन शक्ति बढाउँछ, कृमि नाश गर्छ, हृदय र कलेजोलाई उत्तेजक पार्छ[Read More…]
by GreenKhabar —	July 25, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित उद्यम, हरित खबर